SEIT Koofur Galbeed oo maanta xareynaya Ergada dooraneysa 5-kursi oo Golaha Shacabka ah. | Dayniile.com
Home Warkii SEIT Koofur Galbeed oo maanta xareynaya Ergada dooraneysa 5-kursi oo Golaha Shacabka...
SEIT Koofur Galbeed oo maanta xareynaya Ergada dooraneysa 5-kursi oo Golaha Shacabka ah.
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka dadban ee heer Dowlad-Goboleed ee (SEIT Koofur Galbeed) ayaa maanta Magaalada Baydhabo ku xareynaya Ergada Dooraneysa 5 kursi oo kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya.
Doorashada kuraastaan ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 19ka Janaayo 2022 oo ku beegan Arbacada Todobaadkaan, SEIT Koofur Galbeed ayaa sheegay in Odoyaasha dhaqanka ee beelaha leh kuraasta la dooranayo ay soo xuleen Ergada la xareynayo.
Magaalada Baydhabo xarunka KMG ah ee Koofur Galbeed waxaa ka socda abaabulka lagu xareynayo Ergada dooraneysa 5ta kursi ee Arbacada lagu wado in la doorto, Guddiga FEIT waxa uu diyaariyay goobaha la dejiyo Ergada iyo tababarka kooban ee la siinayo.
Koofur Galbeed oo horay loogu doortay Xildhibaanno katirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee Federaalka Soomaaliya waxaa kuraasta qaar kasoo laabtay cabashooyin, halka la laalay natiijada labo kursi.
Guddiga hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee SEIT Koofur Galbeed ayaa ballanqaaday in uu hubiyo Odoyaasha dhaqanka Beelaha leh kuraasta la dooranayo, Ergada codeyneysa, qaabka ay u dhaceyso Diiwaangelinta musharixiinta iyo Doorashooyinkaas.
Previous articleKenya oo heegan gelisay ciidankeeda inta lagu howlan yahay xuska 3sano guurada weerarkii Dusit D2.
Next articleMEHERKEEDA AYAA MAANTA DHICI LAHAA. LAkin saakay ayey geeriyootay
Senator Maxamuud Axmed Maxamuud (Mashruuc) oo ka tirsan golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goordhoweyd soo saaray baaq nabadeed oo ku aadan xiisada...
Hooyo & Carruurteeda oo ku geeriyooday dab ka kacay Gurigooda
Dab ka kacay Goobo Ganacsi Magaalada Boosaaso
On Iran, Israel’s prime minister talks with the US national security...